मोदीलाई प्रधानमन्त्री ओलीकाे नेपाल भ्रमणकाे निम्तो, मोदीले भने– फेरि भेट होला ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
मोदीलाई प्रधानमन्त्री ओलीकाे नेपाल भ्रमणकाे निम्तो, मोदीले भने– फेरि भेट होला !
माघ ७, २०७६ मंगलबार १४:१६:११ | उज्यालो सहकर्मी
मोरङ – प्रदेश १ मा विराटनगर महानगरपालिकाको भेडियारीमा निर्माण भएको एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) को मङ्गलबार उद्घाटन भएको छ ।
नेपाल–भारतको संयुक्त लगानीमा विराटनगरमा निर्मित आईसीपीको प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रभानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गर्नु भएको हो । आज बिहान ११ बजेको समयमा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत दुवै प्रधानमन्त्रीले 'स्वीच अन' गरेर आईसीपीको उद्घाटन गर्नुभयो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिनुभयो । सम्बाेधनकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशबीचकाे सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन उल्झनमा परेका मुद्दालाई निकास दिने बेला आएकाे भनाइ राख्नु भयाे ।
साथै मोदीले दुई देशबीचको सम्बन्धको आयामलाई कायम राख्नु पर्ने बताए । मोदीले भने, ‘मलाई तपाईँले नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । तपाईँको मित्रता र नेपालीको प्रेमले मलाई नेपाल आउन बाध्य पार्नेछ ।’ अन्तिममा मोदीले नेपालीमै भने– फेरि भेट होला !
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । अहिलेसम्म उनी चार पटकसम्म नेपाल आइसकेका छन् ।